June 2015 - iftineducation.com
iftineducation.com – DAAWO: Sida Turkiga uu Dib u habayn Ugu Suubinayo Dekedda Magaalada Muqdisho (VIDEO) Shirkadda gacanta ku haysa dekkedda magaalada Muqdisho ayaa waxa ay soo bandhigtay Video ku tusaya sida shirkaddani ay dib u habayn ugu suubin doonto Dakedda ugu wayn dalka. Shirkadda Albayrak ayaa bilowgii sanadkii 2014 la wareegtay gacan ku haynta Dakedda, iyadoo markaasi balanqaaday inay dib u…
iftineducation.com – Diyaarad Nuuca Xamuulka qaado ah ay leeyihiin Ciidamada Dalka Indonesia ayaa ku dul bur burtay Guryo kuyaala Xaafad katirsan magaalada Medan oo ah Magaalada Sadaxaad ee ugu balaaran ee dalka Indonesia . ku dhawaad 100-qof ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen shilkaasi diyaaradeed, waxaana diyaarada ay ku dul dhacday Hotel ,guryo ay dad dagnaayeen iyo sidoo kale…
Daawo Muuqaal “Ganacsade ka soo jeedo Gobolka Togdheer oo Dhac Layaab leh u geestay ganacsato Soomaali Itoobiya ah!!
iftineducation.com – Ganacsade ka soo jeedo gobolka Togdheer ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhacay lacag tiro badan ganacsato Soomaaliyeed oo ka soo jeedo dowlada degaanka Soomaalida ee dalkaas Itoobiya ka dib markii uu kala wareegay xoolahoodii islamarkaana uusan wax lacag ah siinin xoolodhaqatadaas. Ganacsatada xoolaha ka keento dowlada deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya ayaa waxaa la sheegay inay cabasho ka muujiyeen…
Daawo Sawir:- lagu Cabiray Banaanbixii Puntiland ka dhacay oo lagu tilmaamay mid aan loo dhameyn
iftineducation.com – Waxaa shalay iyo Daraad Magaalooyin katirsan Maamulka Puntiland ka dhacay Banaanbax balaaran oo looga soo horjeeday Dowlada Federaalka Soomaaliya iyo Maamulka Galmudug oo hada dhismihiisu uu ka socdo Magaalada Cadaado. Mid kamid ah Banaanbaxyada oo ka dhacay Magaalada Garawe waxaa lagu soo bandhigay Sawirada Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka oo lagu dul qoray halku dhigyo aan habooneyn,…
iftineducation.com – Shirkada Samsung qeybteeda elegtarooniga casriga ayaa soo saartay gaadid Casri ah oo suuragalinaaya in Gaadiidka yar yar looga badbaadiyo shilalka. Shirkadaani qeybteeda elegtarooniga ee ku taala dalka Konfur Kuriya ayaa dhawaa suuq galisay Gaadiidkaasi waaweyn oo halista jidka uga digaya baabuurta ka danbaysa, kaas oo sida la sheegay bad baado u noqon doona nolosha kumanaan qof oo shilalka gaadiidka…
iftineducation.com – Dr Gary Miller waxaa uu aad iyo aad u xiiseeyaa cilmiga sayniska iyo weliba xisaabaadka. Waa xisaabyahan aad u baara oo u dabagala wax walba oo caqliga geli kara ( logics). Dhalashadiisu waa reer Kanada, waxaana uu wakhti dheer ka mid ahaa wadaadada fidiya diinta masiixiga. Waxaa uu ahaa nin aad ugu xiran kaniisadaha. Maalin maalmaha ka mid ah…
iftineducation.com – dumarka is cadaaya ayaa waxaa lagala kulmaa dhibaatooyin fara badan xiliga kulanka sariirta 1 dhibaatada koowaad waxaad waxaad lakulmeysaa shiir badan iyo qarmoon aad ubadan 2 qarow iyo dheeleloow badan sida inay habeenkii qayliso ama ay soo boodo 3 cunto xumo kusoo wajahda adiga oon qarash kuu baaqan waayo uma adkeysankarto kulaylka dabka ama cadceeda 4 sida inay adkeysanweydo…
Halkaan Ka Baro Sharciyada Raaxada Jaceylka-Muuqaal
iftineducation.com – Halkan hoose IFTIN waxa uu ku soo qoray sida aad u dhaqmaysid marka aad la socotid gacaliyehaaga ama gacalisadaada. -Dhunkashada dibnaha =waan ku jeclahay. -Dhunkashada dhinaca dibnaha ee uu ku dheehanyahay dareen= Anigaa ku leh Dhunkashada dhegta= waxa aad tahay qof khaas ah -Ilmayn= waan ku tabay. -Dhunkashada dhabanka= saaxiibtinimo. -Dhunkashada sanka= qofka ka qoslin… -Dhunkashada wajiga= niyad u…
Daawo Sheekh aan towxiidka toosin karin oo isku dayaayo inuu gaalo muslimiyo: Video
iftineducation.com – Sheekh Saciid Raage, wuxuu ka mid yahay dad Soomaaliyeed ee ku qaxay waqooyiga Amerika. Waxaa lagu yaqaanaa inuu ka wacdiyo qalabka warbaahinta bulshada (Social Media), iskuna dayaa inuu islaamka u gudbiyo dadka aan muslimka ahaynin ee uu ku dhax nool yahay, ama ku nool dunida dacalladeeda, asagoo adeegsanaayo afka ingiriiska. Sida aan mar sii horreaysay aan ku daawaday waraysi…
Shariif Xasan oo xertay calanka Itoobiya iyo dhoolatus milateri….: VIDEO
iftineducation.com – Ciidamada Itoobiya ee ku sugan magaalada Baydhabo oo qeyb ka ah howlgalka Amisom, ayaa maanta halkaasi kusoo bandhigay dhoolatus milateri iyo qaabka difaaca hujuumka ugu yimaada Al-Shabaab. Shariif Xasan Sheekh Aadan, Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo ka qeyb galay ayaa la dhacay dhoolatuskaan, isagoo calanka Itoobiyana soo xertay, wuxuuna u mahad celiyay ciidamada Itoobiya, kuna amaanay sida ay garabka…